RedFoX GNU: yemahara bhizinesi manejimendi software yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Kubva kuNeux GNU Software ivo vanotiunzira chirongwa umo vagadziri vanobva kuSpain neMexico vanonyanya kubatanidzwa Ndezve redfox, bhizinesi manejimendi software yakanyatsogadzirirwa Linux uye pasi peGNU GPL rezinesi.
Iyo software ichaendeswa kune Windows uye Mac OS X mune ramangwana, asi chinonyanya kufarira cheboka iri kuunza Linux kune ese makambani anoshandisa mamwe masisitimu anoshanda nekuda kwekushomeka kwerudzi urwu rwe software yeiyo penguin chikuva.
RedFoX inogadzirwa mu C ++ / Qt uye inomiririra makore matatu ekuvandudza kuita chirongwa chehunhu, zviri nyore kuisa uye neyakareruka uye inonzwisisika interface. Kubva ku webhusaiti yevagadziri vayo unogona kurodha pasi .sh yekuisa pane chero Linux distro.
Kuva software open source, masosi anowanikwa mu GitHub uye chero munhu anogona kuzviongorora, kuzvishandura, nezvimwe, sezvatinoziva kare mune ino blog. Uyezve taura kuti RedFoX iri muchikamu cheAlfa chekusimudzira kwayo, asi vanogadzira vanovimbisa kuti hazvizonyadzise. Inokurumidza, yakakwana, inokwezva, inoshanda uye iri nyore kushandisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » RedFoX GNU: iwe hausisina zvikonzero zvekusashandisa Linux kubata yako SME